အမာရှတျနဲ့ လှတဈမကျြနှာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမာရွတ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝပြုပြင်ရေးဖြစ်စဉ်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ အရေပြားနဲ့ တစ်သျှူးတွေမှာ အနာဖြစ်တဲ့အခါ ပြန်လည်ပြုပြင်ရာကနေ အမာရွတ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပေါ့။ အနာသေးသေးလေးတွေကလွဲလို့ အနာအများစုဟာ အမာရွတ် အနည်းနဲ့အများတော့ ကျန်တတ်တာပါပဲ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ၊ ရောဂါတွေ၊ ဝက်ခြံလိုမျိုး အရေပြားပြဿနာတွေ၊ ခွဲစိတ်တာတွေကြောင့် အမာရွတ် ကျန်နိုင်ပါတယ်။
>> အမာရွတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ?
အရေပြားအောက်အလွှာ ထိခိုက်မိတဲ့အခါ အမာရွတ်ဆိုတာ ကျန်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ထိခိုက်မိတာကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ ကော်လဂျင်တွေထုတ်တာကြောင့် အမာရွတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအမာရွတ် အရေပြား အသစ်လေးဟာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အရေပြားနဲ့ မတူပါဘူး။ အနာတစ်ခု လုံးဝအနာကျက်သွားပြီဆိုတော့မှ အမာရွတ်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။
အမာရွတ်ဆိုရာမှာလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ဖြူဖြူဖျော့ဖျော့ပါးပါးလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ ခန္ဓာကိုယ်က ကော်လဂျင်ထုတ်တာများတဲ့အခါ အမာရွတ်ကြီးက ထုတက်နေတတ်ပါတယ်။ ထုတက်နေတဲ့ အမာရွတ်ကို hypertrophic scar ဒါမှမဟုတ် keloid scar လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမာရွတ်မျိုးဟာ အသက်ငယ်ငယ်၊ အသားညိုသူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
တချို့အမာရွတ်တွေကျတော့ ချိုင့်တွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အရေပြားကို ထိန်းပေးထားတဲ့အောက်က (အဆီတို့၊ ကြွက်သားတို့လိုမျိုး) အရာတွေ ပျက်စီးသွားတာကြောင့် ဒီလိုအမာရွတ်ချိုင့်ချိုင့်ကြီးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်တချို့နဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တချို့တွေက ဒီလိုအချိုင့်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ အကြောပြတ်ရာလိုမျိုး အမာရွတ်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ရုတ်တရက် ကြီးကောင်ဝင်ချိန်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွေမှာလိုမျိုး အရေပြားကို ရုတ်တရက် ဆွဲဆန့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အခါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဆစ်နားမှာလိုမျိုး တင်းနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ အမာရွတ် ဖြစ်သွားရင်လည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
>> အမာရွတ်ပျောက်အောင် ဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲ?
● လိမ်းဆေး : ဗီတာမင်အီး၊ ကိုကိုးထောပတ်ခရင်မ်၊ အလှကုန်ပစ္စည်း အတော်များများ (ဥပမာ - Bio Oil) က အမာရွတ်တွေကို မှေးမှိန်စေနိုင်ပါတယ်။
● ခွဲစိတ်နည်း : အမာရွတ်ကို မပျောက်စေနိုင်ပေမယ့် အမာရွတ်ပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြောင်းသွားစေပြီး သိပ်မသိသာအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုတက်တတ်တဲ့ hypertrophic scar သို့ keloid scar မျိုးမှာတော့ အမာရွတ် ပိုထင်တတ်လို့ ခွဲစိတ်နည်းကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
● စတီးရွိုက်ထိုးဆေး : အမာရွတ်ထဲ စတီးရွိုက်ထိုးဆေး ထိုးပေးတာကလည်း အမာရွတ်ကို ချပ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ထုတက်နေတဲ့ hypertrophic scar သို့ keloid scar မျိုးအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။
● ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး : အရမ်းဆိုးတဲ့ ထုတက်အမာရွတ်မျိုးတွေအတွက် အပေါ်ယံဓာတ်ရောင်ခြည်နည်းနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည်နောက်ဆက်တွဲတွေရှိတာမို့ အရမ်းဆိုးတဲ့အခါမျိုးမှာမှ ဒီကုထုံးကို သုံးပါတယ်။
● Dermabrasion လို့ခေါ်တဲ့ အထူးကိရိယာတစ်မျိုးနဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားလွှာထုတ်ကုထုံး : ဖုတက်နေတဲ့ အမာရွတ်တွေဖြစ်ဖြစ်၊ ချိုင့်နေတဲ့အမာရွတ်တွေဖြစ်ဖြစ် အမာရွတ်ကို ညီသွားစေချင်ရင် ဒီကုထုံးကို သုံးပါတယ်။
● လေဆာနဲ့ အသားပြန်ဖြည့်ခြင်း : Dermabrasion လိုမျိုးပဲ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို လေဆာ တစ်မျိုးနဲ့ ဖယ်ရှားတာပါပဲ။ လေဆာအသစ်တွေမှာဆိုရင် အရေပြားရဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို မဖယ်ရှားဘဲ အောက်အရေပြားလွှာက ကော်လဂျင်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ဒီလို တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာ‌တွေကြောင့် ရိုးရိုးလေဆာတွေ၊ dermabrasion တွေလောက် အနာကျက်ချိန် မကြာတော့ဘူးပေါ့။
● အသားဖြည့် ဆေးထိုးခြင်း : ဒီကုထုံးကတော့ ချိုင့်ခွက်အမာရွတ်တွေကို ဘေးအသားတွေလို ပြန်ပြည့်လာအောင် လုပ်ပေးတာပါ။
● Microneedling လို့ခေါ်တဲ့ အပ်စိုက်ကုထုံး : အပေါ်ယံအရေပြားထဲကို အပေါက်ရာ သေးသေးလေးတွေ လုပ်ပြီးတော့ ကော်လဂျင်ထုတ်နှုန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးတာပါ။ ကော်လဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဆေးတွေပါ တစ်ခါတည်း ထိုးပေးလို့ရပါတယ်။
အမာရှတျဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သဘာဝပွုပွငျရေးဖွဈစဉျကွောငျ့ ထှကျပျေါလာတာပါ။ အရပွေားနဲ့ တဈသြှူးတှမှော အနာဖွဈတဲ့အခါ ပွနျလညျပွုပွငျရာကနေ အမာရှတျဆိုပွီး ဖွဈလာတာပေါ့။ အနာသေးသေးလေးတှကေလှဲလို့ အနာအမြားစုဟာ အမာရှတျ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ကနျြတတျတာပါပဲ။ ထိခိုကျဒဏျရာတှေ၊ ရောဂါတှေ၊ ဝကျခွံလိုမြိုး အရပွေားပွဿနာတှေ၊ ခှဲစိတျတာတှကွေောငျ့ အမာရှတျ ကနျြနိုငျပါတယျ။
>> အမာရှတျဆိုတာ ဘယျလိုဖွဈလာတာလဲ?
အရပွေားအောကျအလှာ ထိခိုကျမိတဲ့အခါ အမာရှတျဆိုတာ ကနျြတတျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျက ထိခိုကျမိတာကို ပွနျလညျပွုပွငျဖို့ ကျောလဂငျြတှထေုတျတာကွောငျ့ အမာရှတျ ဖွဈလာပါတယျ။ ဒီအမာရှတျ အရပွေား အသဈလေးဟာ ဘေးပတျဝနျးကငျြက အရပွေားနဲ့ မတူပါဘူး။ အနာတဈခု လုံးဝအနာကကျြသှားပွီဆိုတော့မှ အမာရှတျဆိုတာ ဖွဈလာပါတယျ။
အမာရှတျဆိုရာမှာလညျး အမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ အမြားစုကတော့ ဖွူဖွူဖြော့ဖြော့ပါးပါးလေးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတလေ ခန်ဓာကိုယျက ကျောလဂငျြထုတျတာမြားတဲ့အခါ အမာရှတျကွီးက ထုတကျနတေတျပါတယျ။ ထုတကျနတေဲ့ အမာရှတျကို hypertrophic scar ဒါမှမဟုတျ keloid scar လို့ ချေါပါတယျ။ ဒီလိုအမာရှတျမြိုးဟာ အသကျငယျငယျ၊ အသားညိုသူတှမှော ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။
တခြို့အမာရှတျတှကေတြော့ ခြိုငျ့တှေ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ အရပွေားကို ထိနျးပေးထားတဲ့အောကျက (အဆီတို့၊ ကွှကျသားတို့လိုမြိုး) အရာတှေ ပကျြစီးသှားတာကွောငျ့ ဒီလိုအမာရှတျခြိုငျ့ခြိုငျ့ကွီးတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ခှဲစိတျပွီး ကနျြခဲ့တဲ့အမာရှတျတခြို့နဲ့ ဝကျခွံအမာရှတျတခြို့တှကေ ဒီလိုအခြိုငျ့တှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
တဈခါတဈခါ အကွောပွတျရာလိုမြိုး အမာရှတျတှလေညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ရုတျတရကျ ကွီးကောငျဝငျခြိနျတှေ၊ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတှမှောလိုမြိုး အရပွေားကို ရုတျတရကျ ဆှဲဆနျ့လိုကျသလို ဖွဈသှားတဲ့အခါ တှရေ့တတျပါတယျ။ နောကျပွီး အဆဈနားမှာလိုမြိုး တငျးနတေဲ့နရောမြိုးတှမှော အမာရှတျ ဖွဈသှားရငျလညျး တှရေ့တတျပါတယျ။
>> အမာရှတျပြောကျအောငျ ဘယျလိုကုသနိုငျမလဲ?
● လိမျးဆေး : ဗီတာမငျအီး၊ ကိုကိုးထောပတျခရငျမျ၊ အလှကုနျပစ်စညျး အတျောမြားမြား (ဥပမာ - Bio Oil) က အမာရှတျတှကေို မှေးမှိနျစနေိုငျပါတယျ။
● ခှဲစိတျနညျး : အမာရှတျကို မပြောကျစနေိုငျပမေယျ့ အမာရှတျပုံသဏ်ဌာနျကို ပွောငျးသှားစပွေီး သိပျမသိသာအောငျ လုပျပေးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ထုတကျတတျတဲ့ hypertrophic scar သို့ keloid scar မြိုးမှာတော့ အမာရှတျ ပိုထငျတတျလို့ ခှဲစိတျနညျးကို မသုံးသငျ့ပါဘူး။
● စတီးရှိုကျထိုးဆေး : အမာရှတျထဲ စတီးရှိုကျထိုးဆေး ထိုးပေးတာကလညျး အမာရှတျကို ခပျြသှားစနေိုငျပါတယျ။ ထုတကျနတေဲ့ hypertrophic scar သို့ keloid scar မြိုးအတှကျ သုံးနိုငျပါတယျ။
● ဓာတျရောငျခွညျကုထုံး : အရမျးဆိုးတဲ့ ထုတကျအမာရှတျမြိုးတှအေတှကျ အပျေါယံဓာတျရောငျခွညျနညျးနဲ့ ကုသနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရရှေညျနောကျဆကျတှဲတှရှေိတာမို့ အရမျးဆိုးတဲ့အခါမြိုးမှာမှ ဒီကုထုံးကို သုံးပါတယျ။
● Dermabrasion လို့ချေါတဲ့ အထူးကိရိယာတဈမြိုးနဲ့ အပျေါယံအရပွေားလှာထုတျကုထုံး : ဖုတကျနတေဲ့ အမာရှတျတှဖွေဈဖွဈ၊ ခြိုငျ့နတေဲ့အမာရှတျတှဖွေဈဖွဈ အမာရှတျကို ညီသှားစခေငျြရငျ ဒီကုထုံးကို သုံးပါတယျ။
● လဆောနဲ့ အသားပွနျဖွညျ့ခွငျး : Dermabrasion လိုမြိုးပဲ အရပွေားရဲ့ အပျေါယံအလှာကို လဆော တဈမြိုးနဲ့ ဖယျရှားတာပါပဲ။ လဆောအသဈတှမှောဆိုရငျ အရပွေားရဲ့ အပျေါယံအလှာကို မဖယျရှားဘဲ အောကျအရပွေားလှာက ကျောလဂငျြတှကေို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ ဒီလို တိုးတကျလာတဲ့ နညျးပညာ‌တှကွေောငျ့ ရိုးရိုးလဆောတှေ၊ dermabrasion တှလေောကျ အနာကကျြခြိနျ မကွာတော့ဘူးပေါ့။
● အသားဖွညျ့ ဆေးထိုးခွငျး : ဒီကုထုံးကတော့ ခြိုငျ့ခှကျအမာရှတျတှကေို ဘေးအသားတှလေို ပွနျပွညျ့လာအောငျ လုပျပေးတာပါ။
● Microneedling လို့ချေါတဲ့ အပျစိုကျကုထုံး : အပျေါယံအရပွေားထဲကို အပေါကျရာ သေးသေးလေးတှေ လုပျပွီးတော့ ကျောလဂငျြထုတျနှုနျးကို လှုံ့ဆျောပေးတာပါ။ ကျောလဂငျြထုတျလုပျမှုကို လှုံ့ဆျောပေးတဲ့ ဆေးတှပေါ တဈခါတညျး ထိုးပေးလို့ရပါတယျ။
၁၉.၅.၂ဝ၂ဝ | အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး
ဝကျခွံဆိုတာ တဈကိုယျလုံးမှာ ပေါကျနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ လူအတျောမြားမြားမှာတော့ နဖူးဝကျခွံပေါကျလေ့ ရှိကွပါတယျ။ နဖူးအရပွေားအောကျဂလငျးတှေ ပိတျဆို့လို့ နဖူးဝကျခွံဆိုပွီး ဖွဈလာတတျတာပါ။ ဘာမှဆိုးဆိုးရှားရှားမဖွဈပမေယျ့ ကွညျ့ရအငျမတနျဆိုးတာပေါ့။ ဝကျခွံပေါကျစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲမှာ မသနျ့ရှငျးတာ၊ ဟျောမုနျးအပွ...